Sidee bay wasakheynta deegaanka noo saameynaysaa? Tani waa sida ay noo saameynayso. | Saadaasha Shabakadda
Sidee wasakhdu noo saameysaa
Sergio Gallego | | Isbedelka Cimilada, Cimilada
Wasakheynta deegaanka Waa kala dambaynta maalinta xitaa haddii aadan ka warqabin oo aanad dareen badan siinin, waxay si taban u saameysaa jirka oo dhan. Sidee bay wasakhdu noo saameysaa?
Ku noolaanshaha magaalo weyn waxay tusinaysaa wasakheynta deegaanka oo aad u saraysa taasina waxay yeelan kartaa saameyn khafiif ah sida indho fiiqista cudurrada aadka u daran. Kadib waan sharaxayaa sababaha wasakhaynta deegaanka iyo sidee wasakhdu noo saameysaa.
1 Waxyaabaha keena wasakheynta deegaanka
2 Sidee bay wasakhdu noo saameysaa?
Waxyaabaha keena wasakheynta deegaanka
Wasakhowga deegaanka ayaa ka kooban qiiqa walxaha sunta ah ku jira hawada sida kaarboon monoksaydh, baaruud dioxide ama nitrogen oxide. Dhamaan walxahan saameyn ku yeesho jirka qaab cuncun cunaha ah, qufac, neefsashada oo ku adkaata ama xitaa ku dhacda cudurrada wadnaha ee daba dheeraada. Si taas looga fogaado, waxaa lagugula talinayaa inaadan banaanka u bixin howlaha dibada marka heerarka wasakheynta ay yihiin aad u sarreeya. Talo soo jeedin kale ayaa ah inaan lagu noolaan meel u dhow xarun kasta oo leh taraafiko badan ama warshado.
Hawada magaalooyinka waawayn ee dunidu ma aha mid aad u nadiif ah waxaana lagu gartaa inay tahay wasakhda badan. Wasakheyntaan waxaa sabab u ah arrimo badan sida, tusaale ahaan, gaasaska ka soo baxa baabuurta ama warshadaha waaweyn iyo kuwa sameeya lakab ballaaran oo wasakheyn ah jawiga oo dhan. Lakabkan wasakhda ah Xaaladaha qaarkood waxay ka hortagtaa qorraxda inay soo baxdo dhammaanteed iyo sidoo kale si ba'an u saameysa caafimaad dadka.
Sidee bay wasakhdu noo saameysaa?
Wasakheynta bay'ada waxaa ka sareeya oo dhan gawaarida xad dhaafka ah magaalooyinka waaweyn taasna wasakheynaysa kaarboon monoksaydh, oksaydh oksaydh iyo kaarboon laba ogsaydh. Marka hore Waa sun qadar yarna waxay ku soo saartaa madax xanuun, dawakhaad iyo daal. Qasaarooyinka, oksijiin oksaydh ah waxay si aad ah waxyeello ugu leeyihiin dadka qaba cudurka neefta. Ugu dambeyntiina, kaarboon-labo ogsaydhku ma aha mid aad u wasakhaysan laakiin way saameynaysaa kululaynta adduunka ee meeraha.
Waxaa jira waxyaabo badan oo wasakheysan oo aan maalin walba neefsano oo waliba sababa kordhinta xasaasiyadda neef-mareenka, marka lagu daro xoojinta xasaasiyadda in aan heli karno. Shaki la'aan, wasakheynta ayaa ah wax in la yareeyo inta ugu badan ee suurtogalka ah tanna waa inaan masuul ka noqonaa isticmaalka oo aan dhiirrigelinnaa tallaabooyinka yareynaya sii deynta gaaska ee jawiga.
Hadda oo aad ogtahay sidee wasakhdu noo saameysaaWaxaa laga yaabaa inaad fadhiisatid oo aad milicsato sida hawadu aad hada u neefsato ay adiga saameyn kugu yeelaneyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Sidee wasakhdu noo saameysaa
INTAN WAA MUDAN YAHAY
Ku jawaab jaIOS
Waad salaaman tahay, sidee tahay waxaan rabay inaan ogaado, tani waxay ku saabsan tahay faddarada
Ku jawaab valentina
Waxaan u arkaa inay wax badan isku dayaan
Jawaab rodolfo castañio
WAAD KU MAHADSAN TAHAY .... WAAN ISTICMAALAY OO KELIYA
Ku jawaab ALEJANDRA GENSOLLEN RODRIGUEZ
Heerkulka oo sii kordhaya, koalasku waxay beddelayaan dhaqankooda
The Great Barrier Reef wuxuu ku jiraa '' xaalad terminal ''